Ellery Biddle no Talen’ny Advocacy Vaovao ato amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Ellery Biddle no Talen'ny Advocacy Vaovao ato amin'ny Global Voices
Voadika ny 23 Avrily 2015 3:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, русский, বাংলা, عربي, English
Ellery nandritra ny fihaonamben'ny Global Voices tamin'ny Janoary 2015. SARY: Jeremy Clarke
Mientanentana izahay manambara fa rehefa Tonian'ny Advocacy nandritra ny roa taona i Ellery Biddle, dia ho tale vaovaon'ny Advocacy ato amin'ny Global Voices.
Hatramin'ny nidirany ho mpanolotena amin'ny maha-mpanoratra azy ato amin'ny Global Voices tamin'ny 2010, dia noporofoin'i Ellery ny fahavitrihany sy ny fankamamiany ny fisoloambava [advocate] hananjò hiteny malalaka an-tserasera. Rehefa lasa tonian'ny Advocacy izy tamin'ny 2013, dia sarotiny kokoa izy tamin'ny fampanamaroana ny faritra nanaovanay fitateram-baovao, ary nitondra fahalalana lasalavitra teo amin'ny fahalalana ny politikan'aterineto sy ny fisoloambava amin'ny fahalalaham-panehoan-kevitra izy. Nakarin'i Ellery ho amin'ny dingana avo kokoa noho ny ezaka nataony ny fifantohan'ny mpanoratra ao amin'ny GV Advocacy sy ny fahitana azy ireo bebe kokoa, anisan'izany ny fahitan'ireo seha-mpampitam-baovao lehibe tahaka ny The Guardian, The Washington Post, ary ny Slate. Niasa mafy izy hampisy fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices sy ireo manampahaizana manokana momba ny politikan'ny aterineto avy amin'ny vazantany efatra, ezaka nahatonga ny feo vaovao sy fijery vaovao hipaka any amin'ny resadresaka ifanaovana momba ny zo nomerika iraisampirenena.
Ellery miaraka amin'ireo namana ato amin'ny Global Voices tany Berlin, Jolay 2014. SARY: Subhashish Panigrahi
Ny fahalalana lalina amin'ny lohahevitra ihany koa no nahazoan'i Ellery fanajana azy amin'ny mahampikaroka mahaleotena azy eo amin'ny saha misy anay. Mbola nanatsara sy nanòvana izany fahalalàna izay izy amin'ny mahasakaizan'ny Berkman Center for Internet & Society azy ao amin'ny Oniversiten'i Harvard. Tamin'ity taona ity, zava-dehibe niavaka mihitsy ny fahalianana nananany hatry ny ela sy ny fianarana momba ny aterineto ao Kiobà. Raha manomboka misy fihetsehana ny fifandraisan'i Kiobà amin'i Etazonia sy ny firenena hafa manerana an'i Amerika Latinina, dia nitondra fijery avy ao anatiny amin'ny maso mañety amin'ny adihevitra politika sy ny tatitra ataon'ny fampitam-baovao momba ny resaka teknolojia sy ny zon'olombelona ao amin'ny nosy i Ellery.
Iantsorohan'i Ellery ao anatin'ny fotoana lehibe ho an'i Global Voices sy ny fanehoan-kevitra an-tserasera ny andraikitry ny Tale. Efa nanaporofo ny mahaza-draharaha azy, ny fananany fitiavana fatratra ary ny fomba fisainana manana tetipanorona ny asa efa nataony, izay hitohy antsakany sy andavany ao amin'ny fiarahamonina Advox sy ny iraka ampanaovina azy. Mientanentana izahay hiroso eo ambany fitarihany!